fantsona tariby Factory | Mpanamboatra tariby China, mpamatsy
fitoeran-tariby vita amin'ny vy mifono vy
Manana fananana manohitra fahasimbana tena tsara, fanantenan'ny fiainana lava, andrasana lava kokoa noho ny tetezana tsotra, ny famokarana ambaratonga avo amin'ny indostrialy, ny kalitao ary ny fitoniana. Izy io dia be mpampiasa amin'ny tontolo ivelany izay iharan'ny fanimban'ny atmosfera ary tsy mora manamboatra azy.
lovia fantsom-boaloboka vita amin'ny alim-bolo vita anaty vy mafana natsobony
Wire harona tariby harona dia rafitra fitantanana tariby tariby tariby azo avy amin'ny tariby vy mahery. Ny vilia harona tariby dia vokarina amin'ny alàlan'ny fametahana harato voalohany, amin'ny famolavolana ny fantsona, ary avy eo vitaina aorian'ny famoronana. Ny jiro 2 ″ x 4 ″ dia mamela ny onjam-peo mitohy hisorohana ny fananganana hafanana. Ankoatr'izay, ity endrika misokatra miavaka ity dia manakana ny fananganana vovoka, loto ary fielezan'ny bakteria.
Fantsona tariby karazana tohatra efa vita mialoha
Ny fantsom-tariby karazana tohatra dia manana tombony amin'ny lanja maivana, vidiny ambany, endrika tsy manam-paharoa, fametrahana mora, fiparitahana hafanana tsara ary fifindran'ny rivotra. Mety amin'ny fametrahana tariby savaivony lehibe amin'ny ankapobeny, indrindra amin'ny fametrahana tariby herinaratra avo sy ambany. Ny fitsaboana dia mizara ho famafazana electrostatic, nandrisika sy nolokoina, ary koa ny etona dia azo tsaboina amin'ny fikajiana manohitra manokana amin'ny tontolo iainana manimba.